Lenovo Thinkpad X1 Tablet Review - News Fitsipika
Great efijery, matanjaka famolavolana, Ohatra marani-tsaina sy thunderbolt 3 manao ny fahatelo-taranaka ThinkPad X1 Tablet ny vaika mitambatra
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Lenovo Thinkpad X1 Tablet famerenana: toy ny tena toetrany fa amin'ny USB Pro-C” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny alakamisy faha-11 oktobra 2018 06.00 UTC
Lenovo fahatelo-taranaka ThinkPad X1 Tablet mikendry ny ho no-marimaritra iraisana Windows 10 detachable izay manome ny zavatra mpampiasa Microsoft dia tsy ny tena toetrany: USB-C sy thunderbolt 3.
Ny teny dia singa mahazatra. Ny tena voaporitra solosaina dia ho any an-8.9mm matevina takela-kazo eo amin'ny kickstand ny indray sy ny magnetically ampiarahina ny fitendry izay mipetraka eo amin'ny zoro fanoratana ho tsara kokoa.
Fa eto Lenovo miainga avy any amin'ny fandresena minimalist tena toetrany 2-in-1 raikipohy, nitondra ThinkPad foto-tsakafo toy ny manondro nonon'ny, trackpad bokotra, siny miendrika fitendry fanalahidy sy ny lalana tsy voatery-mpiady manintona 4G.
Izany tsy hoe izany no madio workhorse, fa ny loko mainty Matt-asa, fahiny tarehy ThinkPad famantarana sy ny zava-nisongadina tokoa mena manome ny fahatsapana milina ity dia mikasika ny zavatra hatao atao.
Ny 13in lamba dia lehibe kokoa noho ny hahita ny surface Pro ary ny Eve V, ary izany no mahatonga mora kokoa ny mampiasa irery toy ny solosaina. Ny lamba mihitsy no Pin-maranitra, maro loko sy marina momba ny mamirapiratra ampy ampiasaina any an-tokotany. Mijery filma be izany, amin'ny lafiny fijerena tsara, ary raha ny bezels manodidina ny ivelany dia tena lehibe, izy ireo handraisana roa anoloan'ny-miatrika miteny, ny tondro scanner sy ny Windows Hello-afaka IR face rafitra fankatoavana.
Ny kickstand Tsara tahaka ny eny ambonin'ny Pro sy lavitra ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny vahoaka maro be hiakatra detachable propping tablette, na amin'ny fotoany avy izy, na mifandray amin'ny fitendry. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ary tamin'ny indray dia mafy-fahatsapana kickstand amin'ny zoro ny mihetsika malalaka, izay toy tsara toy ny ao ambadiky ny Pro ny tena toetrany, ary tonga lafatra fa ny marina mahazo fiolahana eo am-pofoany na ny birao.
Anoloana-miatrika mpandahateny dia angamba ho malemy noho ny fampiasana teboka X1 Tablet ny haino aman-jery ho toy ny milina, satria na izy ireo somary mazava sy nanova-maimaim-poana, ry zareo ihany koa ny tsy dia mafy, ary tsy na inona na inona ny basse. Ho tsara izy ireo raha toa ianao-tanana mihazona ny milina hijery ny fahitalavitra, fa raha mijery zavatra mahandro sy nandre ny zava-mitranga noho ny extractor mpankafy dia no-mandeha.
Ny X1 Tablet dia natao mba ho mateza kokoa noho ny ankamaroan'ny. Ny lamba dia miafina ao amin'ny ravin-Gorilla Glass, toy ny ankamaroan 'ny fifaninanana, fa ny ThinkPad tsipika manana tantara ny handeha ho amin'ny kilaometatra fanampiny ao amin'ny fitiliana manohitra hamandoana, hovitrovitra sy ny milina dona, izay midika dia tokony hizaka ny isan'andro jolts sy jostles ny commuting.
Screen: 13in QHD + LCD
Processor: Intel Core QUAD-fototra I5 na i7 (8faha taranaka)
Storage: 256, 512GB na 1TB SSD
Rafitra fikirakirana: Windows 10 Home na ny Pro
Camera: 8MP aoriana, 2MP anoloan'ny-miatrika
Fifandraisana: Wifi As, Bluetooth 4.1, 2X thunderbolt 3 (USB-C), écouteur, TPM, microSD, face fankatoavana, tondro scanner, tsy voatery Nano sim sy NFC
Dimensions: 304.1 X 226 X 8.9mm (15.1MM amin'ny Keyboard)
Weight: 890h (1,270h amin'ny Keyboard)
High-ultraportable fampisehoana farany
Ny takelaka sy ny fitendry hanaikitra miaraka avoakan'ireo andriamby,. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny X andian-dahatsoratra dia ny ambony Lenovo-ThinkPad tsipika farany, izany hoe ny X1 Tablet tonga amin'ny hery rehetra mety ianao te.
Tafiditra amin'izany ny safidy ny fahavalo-taranaka farany QUAD-fototra Intel I5 na i7 processeur, 8 na 16GB ny RAM sy ny be ny fitehirizana.
Ny milina araka ny fitiliana Intel Core nanana i7-8550U processeur, 16GB ny RAM, 512GB ny fitehirizana sy 4G, ary tanteraka amin'ny alalan'ny zavatra rehetra nanidina natsipiko tany izany.
Raha ny Integrated Intel UHD 620 Graphics karatra dia mety ho fotoana ny osa indrindra ny X1 Tablet, ny milina sasany nahavita hiatrehana-Pixel goavana 23.000 ny sakany sary tsy nandika be loatra ny hatsembohana.
Ny takelaka mpankafy ao amin'ny afo ka matetika kokoa noho ny sasany mpifaninana, fa izy ireo koa dia tsy mahazo tena mafy ianao raha tsy manao zavatra tena processeur-mafy. Ny ankamaroan 'ny fotoana ry zareo ao amin'ny birao inaudible tontolo.
Fampisehoana amin'ny ankapobeny dia tsara, mifanandrify amin'io ny avo-ultraportable farany milina, fa aza manantena ny hanao hardcore lalao izany - tsy nanandrana azy tamin'ny ivelany sary karatra.
Ny Matt mainty mijery kely nefa matromatroka, fa mahatsapa toy izany Ho hanohitra scratches sy scuff tsara. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny iray amin'ireo zavatra izany no sorona amin'ny ankamaroan'ny PC dia bateria fiainana takelaka. Lenovo mitanisa "mihoatra-noho-ny-andro" ny fiainana ny bateria sivy sy tapany ora, fa ny zava-misy dia ny ThinkPad X1 Tablet maharitra ihany no manodidina ny fito ora eo amin'ny anjara-raharahany. Izany dia miaraka amin'ny "Tsara Kokoa ny fiainana bateria" hery mametraka mavitrika, teny fanodinana in Typora, Browsing in Chrome, mampiasa Nextgen mpamaky, sary fanovana sasany ao amin'ny vinanton'i Photo sy ny maro ny mailaka ao amin'ny Microsoft Mail.
Tena ampy ny mahazo ny alalan 'ny ankamaroan' ny asa iray andro, fa tsy ampy ny hiala ao an-trano ny dovia amin'ny andro mafy. Soa ihany araka ny mampiasa USB Power Delivery handidy, misy USB-C dovia amin'ny ampy wattage tokony hiasa toy ireo hafa nalefa solosaina na fanaovana multi-lovia avy 30W na mihoatra.
roa thunderbolt 3 port, ny Kensington slot hidin-trano sy ny sim lovia dia zavatra rehetra izao amin'ny lafiny iray. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny X1 Tablet avy amin'ny roa thunderbolt 3 seranana izay avo roa heny toy ny USB-C seranana. Ny fananana thunderbolt 3 dia goavana fanitarana Boon toy ny fahaiza-manao dia tsy misy farany, anisan'izany ny masina iray grail ny tady handidy, mampifandray ny 4K manara-maso sy peripheral hafa rehetra dia afaka mieritreritra. Tena manan-danja ny tombony na dia mpifaninana izay tsy ampy USB-C.
Na izany aza, manana seranana roa ihany, iray izay ho ilaina ny hery, midika fa miantehitra amin'ny seranan-tsambon'i na hubs. Tsy toy izany tena olana ho an'ny ankamaroan'ny, fa kely ny seranan-tsambo-juggling no tsy azo ialàna raha tsy vola ao Tsy nahafoy ny karazana.
Misy ihany koa ny karatra microSD mpamaky, izay lehibe, saingy nafenina tany an-sim-slot mitovy amin'ny izay ho hitanao eo amin'ny smartphone. Tsy azo ampiharina ho toy ny mafana-swappable fahatsiarovana karatra mpamaky rehefa mila sim ejector fitaovana mba hahazoana izany, Ary dia midika hoe ejecting ny 4G SIM raha nahazo iray tamin'izany andro izany.
Ny fitendry dia tsara, ary tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny solosaina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tsy tahaka ny tena toetrany Microsoft Pro, ny X1 Tablet dia tonga noho ny fitendry, ary inona ny fitendry izany. Windows 10 detachables velona toy izany, na fatin'ny ny kalitaon'ny ny kitendry, tahaka ny ankamaroan 'ny fotoana ry zareo ampiasaina toy ny solosaina.
Lenovo ny Keyboard no tsara indrindra aho izay ampiasaina amin'ny detachable, sady tsara noho ny ankamaroan'ny solosaina. Ny fanalahidy dia feno-salantsalany, mafy, mahatsiaro ho lehibe eo amin'ny rantsan-tananao, ary ampy lavitra mba ho aina, mahafa-po fanoratana traikefa.
Ny trackpad dia mitovy tsara. Tena tsara tarehy be, manana malama, marina sy mafy orina ambonin'ny Click To izany, ary koa betsaka ny safidy mba ampanjifaina ny traikefa. Fa misy ihany koa ny ThinkPad nivadika, eo amin'ny endriky ny nonon'ny mena kely TrackPoint eo amin'ny G, H sy B fanalahidy, ary telo totozy bokotra eo amin'ny spacebar sy ny trackpad. Hitako fampiasana kely ho azy ireo afa-tsy rehefa eo amin'ny fiaran-dalamby izay ny faran'ny ny fitendry dia voaterin'ny ho any an-ny esory tsara ny taovany noho ny aotra legroom fanakanana ny trackpad.
Ny fitendry no manana ny quirks, toy ny naoty manan-danja ao amin'ny ambany ka hatramin'ny lafiny ankavia fa tsy Ctrl, zavatra Tsy maintsy saika avy hatrany amin'ny toe-javatra manodidina mifamadika ho fahatsiarovana hozatra-Hetezo ary apetaho. , Tsy dia misy haino aman-jery fanalahidy na.
Ny tondro scanner dia manana somary hafahafa nanangana, fa miasa tsara rehefa tsy te-hampiasa ny tavan'ny rafitra fankatoavana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny X1 Tablet manan-Ira-monina endrika rafitra fankasitrahana toy izany tsara toy izay ny tena toetrany amin'ny Microsoft tsipika. Tsy manaiky anao amin'ny hidin-trano-efijery ary hatrany amin'ny hazo ianao, manao fidirana miray volo.
Misy ihany koa ny tondro scanner, izay manana kely hafahafa mitambatra ny nipaipaika sy swiping noho ny fisoratam ny tondro, fa miasa tsara amin'ny andro-to-day asa. Tsy mampiasa azy io hiafara amin'ny birao toy ny tavan'ny fankatoavana niasa tsara, saingy ilaina ho an'ny mamoha ny takelaka rehefa Mombamomba handheld amin'ny fironana, ary ny biometric kokoa safidy ny tsara kokoa.
Mba hampody ny X1 Tablet tsy manokatra ny fitendry tsy maintsy namely ny fahefana tsindrio ny bokotra na ny naoty manan-danja eo amin'ny fitendry
Mahazo safidy ny Windows 10 Home na ny Pro
Ny voatery ThinkPad Pen Pro horonantsary ho ao an-ilany ny milina amin'ny detachable mpihazona ka manao ny tsara ho an'ny marika na sonia ny antontan-taratasy
Ny fampiharana Vantage Lenovo mikarakara ny mpamily fanavaozam-baovao sy ny toe-javatra bespoke amin'ny takela-kazo eo kely dia kely X1 Fuss
Ny taranaka fahatelo-Lenovo ThinkPad X1 Tablet manomboka amin'ny £ 1.480 amin'ny Core I5 ​​processeur, 8GB ny RAM, 256GB ny fitehirizana sy ny fitendry sy tampon'ny avy amin'ny £ 2.422 rehetra ny safidy.
Ny milina araka ny fitiliana vidin'ny £ 1,973.59 amin'ny Core i7 processeur, 16GB ny RAM, 512GB ny fitehirizana sy 4G.
Fa raha oharina, Microsoft ny tena toetrany Pro 6 manomboka amin'ny £ 879, amin'ny modely koa priced ny X1 Tablet.
Ny ThinkPad X1 Tablet Lenovo manaporofo fa afaka manao lehibe detachable 2-in-1 Windows 10 takelaka solosaina. Tsy mora, fa manome fepetra arahana koa na tsara kokoa noho ny lehiben'ny mpifanandrina ny Microsoft tena toetrany Pro, anisan'izany ny tena nilainy seranan-tsambo ankehitriny fifantenana ny thunderbolt 3.
Ny X1 Tablet mahatsapa toy izany dia afaka maka daroka, ary ho tafita velona ny toetrandro maina sy mafana finday miasa, izay no dia natao ho an'ny. Ny lamba lehibe, ary 13in dia mety tsara ny habeny, ny kickstand sy ny fitendry dia marani-tsaina sy ny fampisehoana dia ambony-notch.
Ary ny fito-ora bateria mety ho tsara kokoa ny fiainana, fa ny fampidirana 4G sy roa biometric safidy dia tonga soa fanampiny. Mbola tsara kokoa ny asa noho ny milina milalao, Fa tsara ny misintona ampy avo roa heny adidy rehetra raha tsy tianao atao dia ny fiambenana lahatsary manerana ny efitrano.
Raha toa ianao tany an-tsena ho ambony-end 2-in-1 Windows 10 detachable, ny Lenovo ThinkPad X1 Tablet dia tokony ho eo amin'ny lisitra.
Mahatsara: fanorenana mafy, tsara efijery, marani-tsaina Ohatra, thunderbolt 3, tsy voatery 4G, microSD karatra mpamaky, tondro scanner, face fankatoavana
Maharatsy ny mifampiresaka: roa ihany USB-C seranana, microSD mpamaky karatra tsy mora idirana, lafo
Ny teboka mena eo amin'ny 'i' glows raha ny milina ao standby. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Microsoft tena toetrany Pro famerenana: tena efa ho efa ho ny ho avin'i Windows PCs
Microsoft tena toetrany Go famerenana: takelaka izany tsara kokoa noho ny asa noho ny milalao
Eve V famerenana: upstart Windows takelaka ho an'ny mpampiasa hery dia manana hery anaty lehibe
Philips SHB9850NC écouteur Review
← Google nandefa Pixel 3 Smartphone sy Pixel Slate Tablet Amazon nandefa rano-mahatohitra Kindle Paperwhite →